Thwebula Periscope 1.3.4 – Vessoft
Periscope – isevisi lokusakaza online on the internet. Isofthiwe kwenza ukusakaza ividiyo yokusakaza kudivayisi yakho ikhamera noma upheqa nezinye ukusakazwa emhlabeni jikelele. Periscope ikuvumela ukuthumela imilayezo ngesikhathi ukusakaza bukhoma, upheqa uhlu ababukeli futhi wabelane ukusakaza nabangani. Isofthiwe iqukethe feed izindaba ubonisa ukusakazwa zamanje kanye esidlule. Periscope isekela kudalwa Broadcasting oyimfihlo izilaleli elinganiselwe. Futhi isofthiwe kwenza ukuba ubhalisele abasebenzisi futhi ngezifiso izaziso ukusakaza entsha.
Kwakha yezokusakaza yomphakathi namkha yangeqadi
Ukubuyekeza the ukusakaza kokuqendwa usuku lonke
Ubonisa izindawo ukusakaza ebalazweni emhlabeni
Isaziso mayelana ukusakazwa entsha
Amazwana on Periscope:
Periscope Ahlobene software:
English, Afrikaans, Français, Español... Badoo 4.54.2
Inethiwekhi Yokuxhumana Le service popular ukuqapha izenzakalo zakamuva emhlabeni. Isofthiwe kuhlanganisa iqoqo elikhulu materials on themes ezahlukene futhi kwenza ukuba akhethe umthombo wezindaba ukwazisa.